Masuuliyiin Dawladeed oo olole ugu jira in laga wereejiyo Albayrak-Turky Maamulka Dekadda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Nabadoon caan ahaa oo lagu dilay Muqdisho
Maxuu MW Farmaajo laba todobaad kadib saakay ugu dhoofay Asmara?
Taliyaha ciidanka dhulka oo gaaray Baardheere xilli ay xiisadi ka taagantahay G/Gedo,…
Masuuliyiin Dawladeed oo olole ugu jira in laga wereejiyo Albayrak-Turky Maamulka Dekadda Muqdisho.
By HornAfrik	 On Jul 3, 2017
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa sii xoogaysanayay Abaabulo iyo Olole ay wadaan Siyaasiyiin Soomaaliyeed oo ay ku doonayaan in laga wareejiyo Shirkadda Turkida ah ee Albayrkan Maamulka Dekadda Muqdisho. Waxaana Dadaaladan bar bar socda Olole Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ay iyaguna ku doonayaan inaan la faragalin heshiiska ay Albayrak ku maamusho Dekadda Muqdisho.
Gud Gobalka Banaadir, Thaabit, Wasiiru Dawladaha Madaxtooyadda, C/qaadir Macalin Nuur, iyo Xubno kale ayaa u ololaynaya in Maamulka Dekadda lagu wareejiyo Shirkad laga leeyahay Wadanka Ingiriiska. Waxayna Xubnahan oo sidoo kale taageero ka haysta Madaxwayne Farmaajo ay u sheegeen Shirkadda Albayrak inuu ka dhamaaday Qandaraaskii ay ku joogeen Somalia, Isla markaana aan hadda loo cusboonaysiinayn.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ay ogaatay Hornafrik inay saami ku leeyihiin Dekadda oo ay ka mid yihiin Agaasime Ku Xigeenkii hore ee Madaxtooyo, Saadaq, Wasiiru Dawlihii hore ee Maaliyadda, C/laahi Macalin Nuur iyo Xubno kale ayaa u ololaynaya inaan Shirkadda Albayrak laga wareejin Dekadda Muqdisho. Waxayna ku hanjabayaan inay Mooshin hor gayn doonaan Baarlamaanka Somalia haddii la faragashado Heshiiska Albayrak oo ay ku doodayaan inuu ku egyahay 2022,
Ma jirto Illaa iyo hadda cid og Saamiga ay Siyaasiyiintan ku leeyihiin Dekadda Muqdisho oo aan ku cadayn Heshiiska Dawladda Somalia iyo Shirkadda Albayrak oo lagu wareejiyay Maamulka Dekadda Sanadkii 2012-ka. Waxaana ay Shirkadan qaadataa Dakhliga ka soo xarooda Dekadda 50%.
tan iyo mudadii ay Shirkadda Albayrak maamulaysay Dekadda Muqdisho ma jirto wax horumar muuqda ah oo laga sameeyay Dekadda, iyadoo aysan waxba ka fulin Ballanqaadkii Shirkadda ee ahaa inay ballaarinayso Dekadda Muqdisho.
Dekadaha Somalia ayaa intooda badan waxay hadda u sii gacan galayaan Shirkado Ajanabi ah oo qaarkood aysan wanaagsanayn Sumcadooda.
Faah Faahin: Duqeyn lagu dilay Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacday Sh/Hoose
Mareykanka oo xaqiijiyay inay qaadeen duqeyn ka dhan ah Al-Shabaab
Liibaan Nuur	 Jan 25, 2020 0